Soo dejisan PatchCleaner 1.4.2 – Vessoft
WindowsNidaamkaNadiifinta & WaxyeelayntaPatchCleaner
Bogga rasmiga ah: PatchCleaner
PatchCleaner – utility si looga saaro faylasha rakibaadaha aan loo baahneyn iyo faylasha casriga software. Faylka Windows wuxuu leeyahay nidaam qarsoon oo loo yaqaan ’Installer directory’ halkaas oo faylasha rakibida (.msi) iyo faylasha baakidhka (.msp) ayaa la keydinayaa. Faylasha noocan oo kale ah waa muhiim in la cusbooneysiiyo, saxo oo tirtiro software, laakiin wakhti ka dib waxay ku urursan yihiin xittaa badan iyo badan iyo faylal aan loo baahnayn oo faylasha aan loo baahnayn oo heysta meel bannaan. In Windows, waxaa jira liiska MSI iyo MSP faylasha loo baahan yahay, PatchCleaner isbarbardhigaya waxyaabaha ku jira liiska iyada oo ku jira qaybta nidaamka Installer, iyo ogaado dhammaan faylasha la sii daayay iyo aan loo baahnayn. Ka dib marka la barbardhigo, PatchCleaner wuxuu soo bandhigaa warbixinta yar ee natiijooyinka, kaas oo aad ku arki kartid inta faylasha la isticmaalayo iyo inta imisa aan loo baahnayn. PatchCleaner waxay bixisaa in laga saaro faylasha dheeraadka ah ee MSI iyo msp ee nidaamka, ama u guurto meel kale si marka ay dhacdo dhibaato, waxaad dib u celin kartaa faylasha.
Kala saarista MSI aan loo baahnayn iyo MSP
Fiilka ka reeban
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan fayl kasta
Soo dejisan PatchCleaner
Faallo ku saabsan PatchCleaner
PatchCleaner Xirfadaha la xiriira
Aalad awood leh in ay dib u soo ceshano xogta internet ka. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u soo bixi qaybo ama bogagga internetka oo dhan iyo kuwa u aragto degdeg korodhka.